Harun Maruf - Taariikhda Qoraaga - VOA
Ururka Bisha Cas oo adeeg gurmad degdeg ah ka hirgeliyey Muqdisho iyo Gaalkacayo
Hay’adda Bisha Cas ee Soomaaliyeed ayaa adeeg gurmad degdeg ah oo caafimaaad ka hirgelisay magaalooyinka Muqdishu iyo Gaalakayo. Haddaba adeeggan iyo sida uu u shaqeeyo ayaa Haaruun Macruuf uu ka waraystay Cabdulqaadir Ibraahim oo ah Agaasimaha Warfaafinta Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyiiin ciidmada Midowga Afrika oo ku yaalla tuulada Ceel Baraf oo ilaa 65km dhnaca Waqooyi ka xigta magaalada Jawhar.
Wareysi: Maxay Yihiin 'Ciyaal Weerada' Dhibaatada ku haya Muqdisho?
Booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ay magaalada Muqdishu ka soo baxeen kooxo dib-jiriin ah oo abaabulan oo dhac iyo dil ka gaystay magaalada. Booliiska ayaa kooxahan ugu yeeray “Ciyaal Weero”. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Af-hayeenka Booliiska Gaashaanle Cabdifataax Aadan
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa sheegay inay dawladda Maraykanka ka go’an tahay inay taageeraan dib usoo noolaynta Soomaaliya deggan, nabad ah, islamarkaana dimoqraadi ah.
Laba askari ayaa dhimatay halka midkalana uu dhaawacmay kadib markii maleeshiyo hubaysan ay rasaas ku fureen ciidanka oo saarnaa baabuur dhexmarayey magaalada Dhuusamareeb maanta.
Xog cusub: Magacyada qaar ka mid ah Shabaabka lagu dilay weerarkii Xabsiga Dhexe
Idaacadda VOA ayaa heshay xogta qaar ka mid ah magacyada maxaabiistii Shabaabka ee lagu dilay weerarkii Xabsiga Dhexe iyo midka baxsaday.
Wafdi booqday goobta ay ku dhacday diyaaraddii African Express
Wafdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo safaaradaha Kenya iyo Itoobiya ayaa manta booqday goobta ay ku dhacday diyaaraddii African Express ee duleedka Bardaale.
Madaxweyne Farmaajo oo la hadlay madaxweyne Kenyatta
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Muqdisho oo laga helay 54 kiis oo cusub oo Coronavirus ah
Dowladda Soomaalya ayaa shaaca ka qaaday in 54 qof laga helay cudurka 24-kii saac ee lasoo dhaafay, kuwaasi oo dhammaantood ku sugan gobolka Banaadir.
Askari ka tirsan ciidamada AMISOM una dhashay dalka Uganda oo ku sugan Soomaaliya aaa la sheegay in laga helay xanuunka COVID-19.
Somalia oo shaacisay kiisas cusub iyo dhimasho la xiriirta COVID-19
Dawladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay kiisas cusub oo ah cudurka Coronavirus oo laga helay waddanka 24-kii saac ee lasoo dhaafay.
Fatahaad khasaare badan sababtay oo ka dhacday Qardho
Ugu yaraan lix qof ayaa dhimatay, ila 10 kalena waa la la'yahay, kadib roobab laxaad leh oo sababay fatahaad oo ku dhuftay degaanka magaalada Qardho.
Shacab lagu dhaawacay weerar ka dhacay Hareeri Caadle
Laba qof oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay weerar maanta ka dhacay deegaanka Hareeri Caadle oo u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Qofkii ugu horreeyey oo Coronavirus ugu dhintay Soomaaliya
Dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in qofkii ugu horreeyey uu Soomaaliya u dhintay cudurka Coronavirus. Warkan waxaa xaqiijisay wasiirka caafimaafka Foosiya Abiikar Nuur.
Ciidamada Amisom oo qarax lagula eegtay Sh/Dhexe
Wararka ka imaanaya Gobalka Shabellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax xoog leh lala beegsaday Ciidanka Amisom gaar ahaan qeybta Burundi meel u dhow degaanka Gololey xili ay ku jireen socod ilaalo ah.
Kumuu ahaa Yuusuf Jiis, sarkaalka Mareykanka ay dileen?
Dawlada Maraykanka ayaa sheegtay in duqayn ay 2-dii bishan Abriil ka gaysteen degaanka Bush Madina ee Gobolka Bay lagu dilay Yuusuf Jiis oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan maleshiyada Al-Shabaab.
Dawlada Maraykanka ayaa sheegtay in duqayn ay 2-dii bishan April ka gaysteen degaanka Bush Madina ee Gobolka Bay lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan maleshiyada Al-Shabaab.